Igbo, John: Lesson 085 - Kraịst na-ebu amụma banyere ịjụ Pita (Jọn 13:36-38) | Waters of Life
Home – Igbo – John - 085 (Christ predicts Peter's denial; God is present in Christ)
4. Kraịst na-ebu amụma banyere ịjụ Pita (Jọn 13:36-38)
36 Saịmọn Pita sịrị ya: "Onyenwe anyị, olee ebe ị na-aga?" Jizọs zara ya, sị: "Ebe m na-aga, ị gaghị eso ugbu a, kama ị ga-esochi ya." 37 Pita sịrị ya: "Onyenwe anyị, gịnị mere Ana m eso gị ugbu a? M ga-atọgbọ mkpụrụ obi m n'ihi gị. "38 Jizọs zara ya, sị:" Ị ga-atọgbọ mkpụrụ obi gị n'ihi m? N'ezie n'ezie, ana m asị gị, oke ọkpa agaghị akwa ruo mgbe ị gọnahụrụ m ugboro atọ.
Obi dị Pita ezigbo ụtọ, o geghịkwa ntị n'ihe Jizọs kwuru banyere ịhụnanya. Ihe niile ọ maara bụ na Onyenwe ha na-ahapụ ha na-enwe nsogbu na mkpagbu na nraranye. Ọ dabeere na ya onwe ya, ezi obi na mkpebi ya. O mesiri Jizọs obi ike na ya ga-agbaso ma ọ bụ ego dị oké ọnụ ahịa. O magh i ike na ike ya, kwenyesiri ike na o nwere ike imezu isi ya. O ji ịnụ ọkụ n'obi na-anụ ọkụ n'obi maka Jizọs, dị njikere ịlụ ọgụ ma nwụọ n'ihi ya.
1. Chineke nọ nime Kraist (Jọn 14:1-11)
1 Ekwela ka obi-gi me nkpatu. Kwere na Chineke. Kwerekwa na m. 2 N'ụlọ Nna m ọtụtụ ụlọ. Ọ bụrụ na ọ bụghị, m gaara agwa gị. Aga m akwadebe ebe maka gị. 3 Ọ bụrụ na m aga kwadebere unu ebe, m ga-abịa ọzọ, m ga-anabatakwa unu n'aka m; na ebe m nọ, ị nwere ike ịnọ n'ebe ahụ.
Ndị na-eso ụzọ Jizọs nwere nsogbu n'ihi akụkọ ahụ na Jizọs na-ahapụ ha nakwa na ha apụghị iso ya gaa ebe ọ na-aga. Jisos buru kwa amuma na ghogho Pita ka onye ahu nagide onu iso ya ma nya isi banyere okwukwe siri ike ya. Ụfọdụ ndị na-eso ụzọ nwere ike iche na ha nwere ike ihie ụzọ n'ịgbaso Jizọs bụ onye ga-apụ ma ọ bụ ọbụna ịnwụ. Jizos mebiri ochichi na iru újú ha site n'iwu siri ike. Tụkwasị na Chineke n'ụzọ zuru oke, ọ bụ ntọala siri ike n'oge niile, ọ naghị edoke mgbe ihe ndị ọzọ nile na-ama jijiji. Ọ na-abara nchegbu anyị nsogbu. Egwu bu ugha. Nna gị nke eluigwe adịghị eduhie gị ma ọ bụ hapụ gị. Nke a bụ mmeri nke meriri ụwa - okwukwe gị.
Jizos choro okwukwe nke ndi náeso zoya dika Nna ya kwesiri. Ọ bụ ya na Nna. Dika Nna na-emesi obi ike anyi, otua ka Okpara nyere nkwenye ya. Na Ọkpara, Nna nọ n'ụwa. Ịhụnanya ya kwesịrị ka anyị tụkwasị obi. Eziokwu ya bụ nkume siri ike.
Ya mere, o kpugheere ndi naeso ya ihe ihe gabu mgbe obula onwu ya na nelu igwe. N'ebe Chineke nọ, ụlọ nwere nnukwu ụlọ ma dị mma karịa nke ndị ọgaranya nọ n'obodo ukwu ma ọ bụ n'ime ime obodo. Ụlọ eze dị elu dị ka nnukwu obodo, nke zuru oke iji zụọ ndị nsọ niile n'ebe niile n'oge niile. Ọbụna ma ọ bụrụ na ị na-ebi ugbu a n'ụlọ ntu ma ọ bụ n'ụlọ ezumike, enwela mwute. N'ụlọ nna gị, ọtụtụ ụlọ na ụlọ dị oke ọnụ. O kwadebere gị ebe obibi dị ọcha, nke dị ọkụ na nke ọma. A gwara gị ka ị nọrọ nso Nna gị ruo mgbe ebighị ebi.
Chineke n'onwe Ya, hụrụ ndị kwere ekwe na Kraịst ma kwadebere ha ebe. Mgbe Jizọs laghachiri eluigwe, ọ nyochara ebe obibi ndị a ma gbakwunye ya. Ma o kpebiri ịbịakwute anyị; ọ bu n'obi ka ọ ghara iru anyị anya. Ọ na-abịa ịdọta ndị na-eso ụzọ ya onwe ya. Ọ hụrụ ha n'anya dị ka nwoke na-alụ nwanyị ọhụrụ hụrụ nwunye ya n'anya; ya mere o bu n'obi ikpughe Nzuko ya, Nwunye ahu, n'ihu Nna ya, obughi nani ka ewebata ya nye Nna ya, kama ka o di ka Ya n'ime ezinulo eluigwe. Anyị ga - anọnyere ya, chebe ya na nchedo ya, na - enwe aṅụrị n'ịdị mma ya.
4 Ebe m na-aga, ị maara, ị makwaara ụzọ. "5 Thomas sịrị ya," Onyenwe anyị, anyị amaghị ebe ị na-aga. Àyi gēsi aṅa mara uzọ? 6 Jisus si ya, Mu onwem bu uzọ, na ezi-okwu, na ndu. Ọ dighi onye ọ bula nābiakute Nnam, ma-ọbughi site na Mu.
Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya, sị, "Ị maara ebe m na-aga, ị makwaara ụzọ Chineke." Thomas zara, "Olee otu anyị si mara ụzọ ahụ, ebe anyị amaghị ebe ị na-aga n'ọdịnihu?" N'ime mwute ya, ọ pụghị ịhụ ihe mgbaru ọsọ dị anya. Ụjọ jidere ya; o nwegh i uche ya.
Jizọs mesiri ya obi ike, sị, "Abụ m ụzọ Chineke, ịhụnanya m na eziokwu bụ ezi Iwu na-eduba n'eluigwe, m bụ ụkpụrụ maka mmadụ, nke Chineke ga-ekpe gị ikpe. Nọgidenu n'uzọ nke nādakwasi Chineke: biakutem, were onwe-gi turum: i gāhu kwa na ọ bughi onye nēmebi iwu ka i bu.
Kraist adighi eme ka i ghara itu egwu n'atu egwu, site na obi nkoropu nye obi nkoropu. Mgbe ị ruru ihe ndị dị ala ná ndụ gị, ọ na-esetị aka ya ịzọpụta, na-asị, "Ugbu a, ana m enye gị eziokwu ọhụrụ, eziokwu ochie ahụ dị n'azụ gị, m nwụrụ maka gị, ma mezuo ọgbụgba ndụ ọhụrụ ahụ site na amara. agbaghara gị, okwukwe gị azọpụtala gị. Jidesie m ike ịnakwere n'eziokwu nke ịmalite: n'ime m ka ị ga-anata eziokwu site na ịbịakwute Chineke.
Ị nwere ike ịsị, "Anụrụ m ihe a nile, mana enweghị m okwukwe, ike, ekpere na ịdị nsọ." Jizos zara, "Aname nye gi ndu ebighebi, Mu onwem bu isi ndu: jide m n'okwukwe, i ganata kwa Mo Nso: nime Mo Nso, i ga ahu ndu di ndu." Onye ọ bula nke kwere na Kraist di ndu rue mb͕e ebighi-ebi. Emela ya n'ebe di anya; ọ bụ ndụ gị. Ma ọ bụrụ na ị na-anwụ anwụ na mmehie gị ma ọ bụ na-adị ndụ n'ime Kraịst. Enweghị ụzọ dị n'etiti. Kraist bu ndu onye kwere ekwe.
Ndi nile ha na Kraist nekorita guzosiri ike n'iru Chineke ma hu Ya dika Nna nwere ọmiko. Ọ dịghị okpukpe, nkà ihe ọmụma, iwu ma ọ bụ sayensị ga-adọta gị nso Chineke. Naanị Kraist Ọkpara Chineke nwere ike ime nke a; Ya onwe-ya nēguzo n'iru Ya. Jisos bu nkpughe zuru oke nke Chineke. Ọ dighi onye ọ bula mara nna-ya site n'aka-ya. Anyị nwere ihe ùgwù nke ịmara Chineke; anyị na-abịakwute Ya n'ihi nà Kraịst bụ ịhụnanya, ma mee anyị ụmụ nke Chineke.
7 A sị na ị maara m, ị ga-amakwa Nna m. Site ugbu a gawa, ị mara ya, hụkwa ya."
Ụmụ nke ụwa a dị anya site na Chineke n'ihi mmehie ha. Odighi mmadi primata Chineke nke aka ya. Ọ dighi onye ọ bula huworo Chineke, kama Ọ bu Ọkpara Ọ muru nání Ya, Onye nādabere n'obì Nna-Ya. Ọ na-agwa anyị: Ọ bụrụ na ị maara m, ị ga-amakwa Nna ahụ. Ma, ha amaghị nke a. Ihe omuma abughi ihe omuma na sayensi, mana mgbanwe na mmeghari ohuru. Ihe omuma Chineke na-adi n'ime anyi, na-egosi na ndu. Ekwela ka a ghọgbuo gị, ọmụmụ ihe okpukpe apụtaghị ịmara Chineke. Kedu ihe ga-eme ka ị nweta ìhè nke na-eme ka ozi ọma ahụ dị ọhụrụ. A ga-agbanwe gị ma ghọọ ìhè.N'oge hour nke nragha Jizos siri ndi neso uzo ya ihe ijuanya, "Site na ugbua unu maram, obugh nani onye nwere ike, onye mara ihe na onye di ebube, ma Nwa aturu Chineke nke n'ewepu nmehie nke uwa. ọnwụ Chineke na-ekpughe onwe ya dị ka Nna na-eme ka ha dị ná mma, n'ihi na Ọ gaghị ata ahụhụ mmehie gị n'iwe, ma ọ bụ bibie, ma ga-ata m ahụhụ, Ọkpara ya, ka ewe nwee ike ịtọhapụ gị ma gbanwee ka ị bụrụ ịdị nsọ, ịbanye n'udo dịka ụmụ ya."
N'elu obe, Chineke na-egosiputa onwe ya dika Nna. Onye di ebube abughi n'ebe di anya, mana bu ebere, ebere na mgbaputa. Chineke bu Nna gi. Ị bụ ndị kwere na m, na naanị gị maara eziokwu banyere Chineke. Ihe ọmụma a ga-agbanwe gị ka ị ghọọ ihe ọmụma gị bara uru nke nwere àgwà na àgwà ọma.
8 Filip sịrị ya: "Onyenwe anyị, gosi anyị Nna anyị, nke ahụ ga-ezuru anyị." 9 Jizọs sịrị ya: "Ọ bụ ogologo oge ka m nọnyeere gị, ị maghị m, Filip? Onye hụrụ m ahụwo Nna m. Kedu ka ị si sị, 'Gosi anyị Nna ahụ?'
Mgbe Jizos siri, "Unu ahuwo Nnam ma mara ya." O juru Filip anya na ọ fọrọ nke nta ka ọ sị, "Mba, anyị ahụghị Ya", ma ihere nke Onyenwe ya mere ya ihere. Utu ke oro, enye ama etịn̄ ikọ emi, "Ọbọn̄, owụt nnyịn Ete, ndien enye ama ọfọn." Azịza a na-egosi na ọ ghọtara ihe omimi Jizọs na ike ya.
Ihe nzuzo ahụ dabeere na mmekọrịta ya na Nna ya. Ọ bụrụ na ọ ga-ahapụ ha, ọ bụ iji gosi ha Nna ọbụna ruo nwa oge ka e wee nye ha ọrụ dịka ọ nọ ma chebe ike nke Onye Kasị Elu. Mgbe ahụ, ha ga-amata ma hụ ọnọdụ Chineke ma nata ikike n'ebe ndị mmadụ nọ, ike ịgwọ na ịchụpụ.
Mana site na ario a, Filip kwuputara na ya amataghi Nna ma obu Okpara. Ọ kwụsịrị ịmata Chineke na eziokwu. Jizọs abaghị mba, ma ọ bụ ebere, na mgbede ikpeazụ ya kwupụtara eziokwu dị ukwuu, "Onye hụrụ m ahụwo Nna m." Site na okwu a echeghariri okwu Jisos weghaara ákwà-nkpudo nke dina n'iru ndi a. Ọhụụ ma ọ bụ nrọ agaghị egosipụta eziokwu banyere Chineke; naanị onye nke Jizọs Kraịst. Ọ bụghị naanị mmadụ dị mkpa, mana nime ya anyị hụrụ Chineke n'onwe Ya. Taa ị nwere ike ịhụ ọhụụ Chineke ma ọ bụrụ na ị hụ Jizọs ma mara ya.
Tọmọs nụkwara okwu ndị a ma ghara ịghọta ihe ha batara. Ma mgbe emere ka Jisos si n'onwu bilie, o kwatuo n'iru Nna ya ukwu ma tie mkpu, "Onyenwe m na Chinekem!".
10 Ì kweghi na Mu onwem nọ nime Nnam, Nnam nọ kwa nimem? Okwu m na-agwa gị, anaghị m ekwu onwe m; ma Nna nke bi nimem nālu ọlu-Ya. 11 Kwem na Mu onwem nọ nime Nnam, Nnam nọ kwa nimem; ma ọ bụ ihe ọzọ kwere m n'ihi ọrụ ndị a.
Ọ nwere ike ịbụ na onye na-eso ụzọ na-eburu ozi ọma ahụ n'isi ma hụ ka Jizọs dara mbà, ma ọ ghọtaghị ihe kachasị ya ma ọ bụrụ na ọ dịghị agbanwe obi site na Mmụọ Nsọ. Jizos mere ka Filip juputa n'agbagha banyere okwukwe nke chi ya, "Ùnu ekwere na Mu no nime Nnam? Ndu nke ndu m bu inye Nna otuto, Mu onwem no nime Nnam. Nnam di nimem n'anu aru Ihe omuma nke Chineke di nime m, amuwo m site na Mo Nso, we biri n'etiti unu n'enweghi nmehie, amataram ya site na mgbe ebighi ebi, ihe omuma a wee buru m n'ime n'ime m O gosiputa ezi obi Ya na ebere ya."
"Enwere m ihe akaebe maka ịgba akaebe a: Okwu ndị m kwadoro na ọrụ Chineke Ọ bụrụ na ọ na-esiri gị ike inwe okwukwe na ọnụ Nna m n'ime ya, gee ntị n'okwu m, nke Nna na-ekwu site na m. Okwu ndị a na-enye gị ndụ, ike na nkwuwa okwu Ọ bụrụ na ị ghọtaghi okwu m, lee ọrụ m; Chineke n'onwe Ya, na-arụ ọrụ n'etiti gị site na ihe ịrịba ama nke eluigwe, Ọ na-azọpụta gị site n'aka m, gị ndị furu efu ugbu a, ị ga-ahụ na oge nke akpọgidere m n'obe. nke ọrụ Chineke, ime ka ihe a kpọrọ mmadụ dị n'udo site na ọnwụ m. Mepee anya gị, egbochila ntị gị, ị ga-amata Chineke n'ime ndị a kpọgidere na ya, nke a bụ ezi Chineke ahụ agaghị ama gị ikpe kama ịzọpụta gị."
EKPERE: Onyenwe anyị Jizọs Kraịst, site na amara m na-asị, "Onyenwe m na Chineke m!" Gbaghara m enweghị okwukwe na enweghị ịhụnanya. Mepee anya m nke oma nye Mo Nso gi, ka m wee hu Nna n'ime gi, ma gbanwee ya n'anya Ya, ka ihe omuma gi wee di ndu karia onwu. Na-ekpughe ihe kacha mkpa nke ebube gị nye ndị na-ekweghị ekwe ka ha wee nweta ndụ ọhụrụ site n'okwukwe.
Gịnị bụ mmekọrịta dị n'etiti Kraịst na Chineke bụ Nna?
Page last modified on March 05, 2020, at 06:32 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)